Kalandrieran'ny volana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Kalandrieran'ny volana
Ahitana voanio sira eo amin'ny kalandrie jona
Sauerkraut dia manan-karena amin'ny vitamina, izay misy fiantraikany tsara eo amin'ny taratasy mivalona ho an'ny olombelona. Mora ny manomana ilay sakafo, nefa fantatry ny mpikarakara tokantrano fa araka ny alimanakan'ny volana dia misy andro tsara ho an'io dingana io. Sakomby, voaoty amin'ny andro ankavanana, matsiro sy lavenona.
Lanin'ny volana alarobia tamin'ny volana Ôktôbra 2019
Ao amin'ny kalandrie an'arivony, ireo vanim-potoan'ny volana dia aseho, izany hoe fiovan'ny toetr'andro ivelany, arakaraka ny fivoahan'ny masoandro manazava ny ampahany amin'ny satelita eto an-tany. Mandritra ny 29 hatramin'ny 30 volana ny volana isam-bolana ary misy lozam-pifidianana efatra volana izay misy fiantraikany amin'ny olombelona sy ny dingana maro amin'ny planetantsika. Inoana fa hisy fiantraikany amin'ny tsiro sy ny kalitaon'ny fiomanana amin'ny ririnina, indrindra fa ny sauerkraut.
Rahoviana ny sira salohalika amin'ny alim-bolana amin'ny volana Janoary 2019?
Sauerkraut na voankazo marokoroko dia matetika no mipetraka eo amin'ny latabatra mandritra ny vanin-taona mangatsiaka, satria ankoatra ny tsiro mafilotra sy marefo dia manana fanasitranana izy ary koa loharanon-javatra maro sy vitaminina mahasoa. Anisan'ireo izay mazoto amin'ny sira salohy, maro no mihavana amin'ny alimanaka maivana, satria na dia manaraka ny teknôlôjia sy ny resipeo aza ianao, dia mety hahazo vokatra hafa tanteraka.
Lanonana famakiana volana famaranana ho an'ny volana May 2019
Ny volana isam-bolana dia manana ny androm-piainany tsara amin'ny raharaham-barotra ary tsy manolo-tena amin'ny fiasana eto an-tany. Ao amin'ny fandaharam-potoan'ny mpanao zaridaina-zaridaina ho an'ny May, 2019, miaraka amin'ny toro-làlana amin'ny kalandrie an'arivony sy ny nuances amin'ny fampiasany, amin'ny antsipiriany - ao amin'ny lahatsoratra. Ny fiantraikan'ny fotoan'ny volana amin'ny famolavolana ny planeta Rehefa manakaiky na mamela ny tany ny volana, dia misy fiantraikany eo amin'ny biôzôra amin'ny planeta misy antsika.
Ny endriky ny fivalom-boanio tamin'ny volana Novambra araka ny kalandrie jona
Sauerkraut dia sakafo matsiro sy matsiro. Ny vokatra tsara indrindra dia azonao raha manaraka ny kalandrien'ny volana ianao. Ny andro-n'ireo volana novambra no tsara indrindra amin'ny fanangonana legioma, vakio etsy ambany. Mahafaly tokoa ny manao ny fijinjana karaoty amin'ny kalandrie an'arivony? Ny razambentsika dia nanomboka niasa tamin'ny fanangonam-biriky arakaraky ny 14 oktobra (ny andro firavoravoana amin'ny fanelanelanana) araka ny fizotran'ny volana.
Kalandrie masoandro amin'ny volana Janoary 2019
Amboary ny asanao amin'ny voninkazo amin'ny volana janoary miaraka amin'ny kalandrie voajanahary. Hanampy amin'ny famaritana ny vanim-potoana famafazana na famindrana fambolena indostrialy. Momba izany - fanampiny ao amin'ilay lahatsoratra. Ahoana ny fiantraikan 'ny volana ao amin' ny zavamaniry? Ny kalandrien-taolana dia fanambarana tsotra momba ny vanim-potoan 'ny volana mandritra ny volana. Misy 4 isam-bolana: ny volana mitombo, ny volana feno, ny volana miposaka ary ny tsinam-bolana.
Karazana fambolena zana-ketsa eo amin'ny zaridaina amina zaridaina sy zaridaina
Amin'izao fotoana izao, ny mpamboly dia vonona ny hitodika amin'ny alimanaka amin'ny volana, satria nanjary nalaza be ny fambolena biodynamic. Ny fambolena biodynamic dia mifototra amin'ny fambolena zavamaniry, izay iankinan'ny mpamboly amin'ny fizotran'ny volana. Ny fitaratry ny satelita momba ny tany amin'ny zavamaniry dia efa hitan'ny olona hatramin'ny taloha, fa amin'izao fotoana izao dia efa voaporofo izany ny siansa.
Volana famafazana famonoana alimo amin'ny 2019 ho an'ny faritra Moskoa
Ny fahazoana vokatra tsara dia tsy voatery ho azo antoka foana amin'ny fahaiza-manao sy ny fahalalan'ny mponina amin'ny fahavaratra. Izany no mahatonga ireo mpikaroka za-draharaha hijerena ny alimanakan'ny volana, izay mifototra amin'ny lalàn'ny natiora ary afaka manondro ireo andro tsara indrindra, tsy ho an'ny fambolena sy famolavolana karazan-javamaniry samihafa, fa koa ho an'ny fanodinkodinana sy karazana asa samihafa ao amin'ireo tranonkala, izay misy fiantraikany be foana amin'ny vokatra farany .
Mpamboly kalenderan'ny volana jolay ho an'ny taona 2019
Ny kalandrie famafazana ala ho an'ny mpamboly sy ny floristin'ny Belarosy amin'ny 2019 dia hanampy amin'ny fametrahana mora foana ny andro tsara sy ratsy ho an'ny famafazana zavamaniry. Inona ireo rhythms volana, ary koa ny fiantraikan'ny satelita eto an-tany amin'ny kolontsaina - vakiana etsy ambany. Inona no fiantraikan'ny foto-tsakafon'ny volana eo amin'ny fitomboan'ny zavamaniry? Misy fiantraikany eo amin'ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny zavamaniry.
Volana fanangonam-bokatra ho an'ny mpamboly tamin'ny Novambra 2019
Ny volana tsy isalasalana fa misy fiantraikany amin'ny Tany. Ny fijerin'ny linia, afaka manatsara sy mampidina rano an-tapitrisa taonina, miteraka riandrano sy ny ebbs, dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny fiainana rehetra eto amin'ny planeta misy ny zavamaniry. Ny kalandrie famafazana volana dia mifototra amin'io tranga io, izay horesahina ao amin'ny lahatsoratra.
Kalandrie fananganana ny 2019 any Siberia ho an'ny zaridaina sy ny zaridaina
Ho an'ny fambolena voa-janahary ny zaridaina sy ny fambolena, dia ny tantsaha dia manondro karazam-pitaovana, ary ny iray amin'izy ireo dia ny kalandrie an'arivony. Ny Siberia dia samy hafa amin'ny tarika afovoany, tsy amin'ny toetr'andro ihany, fa amin'ny volana maromaro ihany koa, noho izany, ireo mpanandro dia manangana kalandrie manokana ho an'ireo mpamboly Siberiana, mpamboly voninkazo sy zaridaina.
Kalandrie masoandro amin'ny volana Desambra 2019
Ao an-tsain'ny ankamaroan'ny olona, ​​na ireo izay manana zavatra atao amin'ny fambolena aza, ny alimanaka famafazana volana dia mifandray indrindra amin'ny lohataona sy ny lohataona, noho io fotoana io fa ny olana momba ny fambolena dia (raha ny marina, ho an'ireo mponina any amin'ny ilomasina avaratra) toa manan-danja.
Kalandrie fambolena 2019 ho an'ny mpamboly sy mpamboly
Maro ny zaridaina mandray anjara amin'ny fambolena legioma sy voankazo, manamboatra ny fambolena, mifantoka amin'ny daty tsara amin'ny kalandrien'ny volana. Ary tsy mahagaga izany, satria efa fantatra ela ny fiantraikan'ny satelita eto an-tany amin'ny zavamananaina sy ny fizotran'ny zavamananaina rehetra eto an-tany. Ahoana ny fiantraikan'ny foto-tsakafon'ny volana eo amin'ny zavamaniry, ary rehefa tsara kokoa ny fanatanterahana ny asa momba ny fambolena - mbola ao amin'ny lahatsoratra.
Volana fanangonana alim-bolana ho an'ny zaridaina amin'ny volana Aogositra 2019
Fantatry ny olona nandritra ny fotoana lava be momba ny fiantraikan'ny volana eo amin'ny tontolo iainana rehetra eto an-tany, ary rehefa nanomana ny asany izy ireo, dia tsy mahagaga raha nifantoka tamin'ny toetr'andro ny razambentsika tamin'ny orinasa mpamboly nokleary, fa koa teo amin'ny dingan'ny "kintana kely". Raha tsiahivina, ny kalandrie lunar famafazana dia tsy namoy ny maha-zava-dehibe azy amin'ny vanim-potoana maoderina amin'ny fampivoarana teknolojia vaovao sy ny fikarohana siantifika.
Rehefa sira amin'ny karaoty amin'ny alakamisy amin'ny volana Desambra?
Sauerkraut dia iray amin'ireo sakafo tena malaza indrindra amin'ny ririnina. Ankoatra ny zava-misy fa mahafinaritra izy io, dia heverina ho mpamatsy tokana ascorbic, fibre ary enzymes. Mba hanamboarana ny lava-pandrika sy ny sokatra dia maro ny tokantrano no mameno ny vokatra amin'ny andro sasany amin'ny alimandrin'ny volana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Kalandrieran'ny volana